“Odoroska miisaaniyad Qaranka ee 2020, waa miisaaniyad sannadeedkii 4-aad ee Baarlamaankii 10-aad uu ansixiyay” – Kalfadhi
“Odoroska miisaaniyad Qaranka ee 2020, waa miisaaniyad sannadeedkii 4-aad ee Baarlamaankii 10-aad uu ansixiyay”
Kal-fadhiga 6-aad kulankiisa 4-aad ayay si wada jir ah shalay u yesheen xillibaanadda labada Aqal ee Barlamaanka Soomaaliya, iyada oo uu ajandaha kulanka ahaa Akhrinta 2-aad ee warbixinta hindise-sharciyeedka miisaaniyadda Qaranka 2020-ka.
Gudoomiyayaasha labadda aqal ee Golaha shacabka iyo Aqalka Sare, ayaa si wada-jir ah u shir-guddoominayay Kal-fadhiga 6-aad kulankiisa 4-aad.
Guddoomiyaha guddiga maaliyadda iyo miisaaniyadda ee Barlamaanka Soomaaliya Xildhibaan Maxamuud Siraaji, ayaa xillibaanada labada aqal u aqriyay warbixintaasi, waxaana intaasi ka dib bilaabatay doodaha-soo-jeedinta eek a imaaneysay xildhibaannada. kulanka waxaa si wada jir ah u shir gudoominaya gudoomiyayaasha labadda aqal ee Golaha shacabka iyo kan aqalka sare ee soomaaliya.
“Odoroska miisaaniyad Qaranka ee sanadka 2020, waa miisaaniyad sannadeedkii 4-aad ee Baarlamaankii 10-aad uu ansixiyay. Miisaaniyadan waa miisaaniyaddii ugu horreysay oo labada gole inta ay si-wadajir ah u-wada fiirtay, lagana dooday ayna ansixiyaan”, ayuu yiri xildhibaan Siraaji.
Madasha Xisbiyada Qaran “Waxaan ka shirnay sidii loo sameyn lahaa guddi-qiimeyn ku sameeya Qaraxii Ex-Kontoro”